Musi wa5 Chikumi isu tine mutsva chiitiko chiitiko kuApple Watch | Ndinobva mac
Musi waJune 5 isu tine mutsva chiitiko chiitiko kuApple Watch
Mushure memwedzi yakati wandei pasina zviitiko zvevashandisi zvevashandisi veApple Watch, musi wa5 Chikumi Apple ichatanga imwe uye mune ino nyaya ichave yekupemberera iyo Zuva reNyika Zvakatipoteredza. Kambani yeCupertino yakaisa matambudziko aya padivi panguva yechirwere checoronavirus uye isu takarasikirwa nedambudziko reZuva rePasi. Chero zvazvingaitika, matambudziko emitambo adzoka uye tiri kufara nezvazvo sezvo vachipa mukana wekutanga mutambo kune vese vanoona zvichinetsa uye kune avo vatove vatambi inopa mukana wekuwana imwe yakasarudzika bheji, nezvitambi zvavo zvinoenderana nekutumira iwo mameseji.
Chokwadi ndechekuti mune ino nyaya chinangwa chiri nyore kune ese marudzi emushandisi, kunyange chiri chokwadi kuti haasi akaomesesa matambudziko muzviitiko zvakawanda. Mune ino kesi Apple inoda kuti isu tiwane mhenyu mhete kumira kweminiti imwe muawa yega yega mukati memaawa gumi nemaviri pazuva, nekudaro uchiwana menduru uye "kukudzwa kwese."
Dambudziko razvino hariratidzike pamawachi asi hazvitore nguva kuti zviite. Icho chinhu chiri nyore, mhete iyo vazhinji vashandisi vanowanzo vhara zviri nyore sezvo kumira nguva yega yega kweminiti chinhu icho chinenge isu tese tinoteerera. Pakupedzisira ndezve famba neimwe nzira uye isu tinogutsikana kuti iyi mhando yedambudziko inoita kuti vanhu vasanyanya kugara. Mune yangu kesi, iyi mhete inowanzo kuve yeimwe yekutanga kuvhara paApple Watch yangu uye inowanikwa pasina kuita kuyedza kwepanyama kana kudzidziswa. Enda kune iro dambudziko!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Musi waJune 5 isu tine mutsva chiitiko chiitiko kuApple Watch
Greatness Code kutanga paApple TV + muna Chikunguru
Apple inotangisa yechishanu Beta yeMacOS Catalina 10.15.5